Axmed Madoobe oo hambalyo u diray xubnaha aqalka sare ee Jubbaland. – Radio Daljir
Axmed Madoobe oo hambalyo u diray xubnaha aqalka sare ee Jubbaland.
Oktoobar 19, 2016 10:34 g 0
Madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu soo dhaweynayaa Doorashadii xalaasha ahayd ee ay Baarlamaanka Jubbaland kudoorteen xubnaha Aqalka Sare u matalaya Dowlad goboleedka Jubbaland ayada oo noqoneysa Tallaabo horey loogu qaadey Doorashada 2016 ee Soomaaliya.
“Doorashadan oo si xalaal ah u dhacdey waxaan ugu hambalyeynayaa Xubnaha kuguuleystey kamid noqoshada Aqalka sare ee Jamhuuriyada federaalka Soomaaliya aniga oo ilaahey uga baryaya inuu ku garab galo kuna guuleeyo Masuuliyada loo igmadey.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa si gaar ah ugu Hambalyeey halka kursi ee ay Dumarku kuguuleysteen “Waxaan si gaar ah ugu Hambalyeynayaa Marwo Fadumo Gariyo oo kaligeed nasiib uyeelatey inay buuxiso qeybta Haweenka ee matalaada Aqalka Sare ,,.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa u mahad celiyey Ciidamada Amaanka ee Jubbaland qeybohooda kala duwan ee sugayey Amaanka Goobta ay kadhaceysey Doorashadu iyo guud ahaan magaalada.
Ugu danbeyn Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuxuu bogaadiyey kuna amaaney Gudiga Doorashada heer Federal iyo heer Dowlad goboleedba sida habsamida leh ee ay Doorashada Aqalka Sare u ee Jubbaland u qabsoontey.
Xaaladda magaalada Galkacyo oo saaka degan iyo ciidamadii oo is-horfadhiya.